Iindaba - Ukuqwalaselwa kwemizi mveliso | Amaxabiso e-PLA ahlala ephezulu ngenxa yeeplastikhi ezinokuqhuma
Ukuqwalaselwa kwemizi mveliso | Amaxabiso e-PLA ahlala ephezulu ngenxa yeeplastikhi ezinokuqhuma
I-PLA kunzima ukuyifumana, kwaye iinkampani ezinje ngeLevima, Huitong kunye ne-GEM ziyakwandisa imveliso. Kwixesha elizayo, iinkampani ezenza ubugcisa be-lactide ziya kwenza inzuzo epheleleyo. UZhejiang Hisun, iTekhnoloji yaseJindan, kunye neTekhnoloji yeCOFCO iya kugxila kulwakhiwo.
NgokukaMbutho wezezimali (uJinan, intatheli uFang Yanbo), kunye nokuqhubela phambili kwesicwangciso esili-carbon kunye nokuphunyezwa komyalelo weplastikhi, iiplastikhi zemveli ziye zacima emarikeni, ibango lezinto ezinokuthotywa likhule ngokukhawuleza, kwaye iimveliso ziyaqhubeka ukunqongophala. Umntu ophezulu kwimizi-mveliso waseShandong uxelele intatheli yeendaba ezivela kwiCailian News, "Ngezibonelelo zekhaboni ephantsi kunye nokhuselo lokusingqongileyo, amathuba okuthengisa izinto ezinokuthotywa abanzi kakhulu. Phakathi kwazo, izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezimelwe yi-PLA (polylactic acid) kulindeleke ukuba zinokuthotywa. Izinto eziluncedo kwisantya, umqobo kumzi mveliso kunye netekhnoloji yemveliso zezokuqala ukwaphula umdlalo. ”
Intatheli evela kwiCailian News Agency yenze udliwanondlebe neenkampani ezininzi ezidwelisiweyo kwaye yafunda ukuba ibango langoku lePLA liyakhula. Ngonikezelo lwangoku olunqongopheleyo, intengo yentengiso yePLA ibinyuka yonke indlela, kwaye kusenzima ukuyifumana. Okwangoku, intengo yentengiso ye-PLA inyuke yaya kwi-40,000 yuan / ton, kwaye abahlalutyi baqikelela ukuba ixabiso leemveliso zePLA liza kuhlala liphezulu kwixesha elifutshane.
Ukongeza, le mithombo ichazwe ngasentla ichaze ukuba ngenxa yeengxaki ezithile zobuchwephesha kwimveliso yePLA, ngakumbi ukunqongophala kwezisombululo zeshishini ezisebenzayo kubuchwephesha bokubumba izinto ezingasafunekiyo ze-lactide, iinkampani ezinokuvula itekhnoloji yomzi mveliso yonke I-PLA kulindeleke ukuba yabelane ngezahlulo ezingaphezulu zeshishini.
Ibango lezinto zePLA liyanda
I-Polylactic acid (i-PLA) ikwabizwa ngokuba yi-polylactide. Luhlobo olutsha lwezinto ezisekwe kwi-bio eziveliswe kukumiswa komzimba kwi-lactic acid njenge-monomer. Inezinto eziluncedo zokubola kwendlela elungileyo, uzinzo olushushu, ukumelana nokunyibilika kunye nokusebenza ngokulula. Isetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni nasetafileni, unyango kunye nokhathalelo lomntu. , Iimveliso zemiboniso bhanyabhanya kunye nezinye iinkalo.
Okwangoku, ibango lehlabathi leeplastikhi ezinokuthotywa likhula ngokukhawuleza. Ngomiliselo lwe "isithintelo seplastiki" kunye "nokuvalwa kweplastiki", kulindeleke ukuba ngaphezulu kwe-10 yezigidi zeetoni zeemveliso zeplastiki ziya kutshintshwa zizinto ezinokuthotywa ngonyaka ka-2021-2025.
Njengokubaluleka kwezinto ezibonakalayo ezinokubola Okwangoku yeyona mveliso sele ikhulile, imveliso inkulu, esetyenziswa ngokubanzi, kunye nexabiso eliphantsi elenziwe bio-based iplastiki enokuthotywa. Abahlalutyi baqikelela ukuba ngo-2025, ibango le-polylactic acid kulindeleke ukuba lidlule kwi-1.2 yezigidi zeetoni. Njengenye yeemarike ezikhula ngokukhawuleza ze-polylactic acid, ilizwe lam kulindeleke ukuba lifikelele ngaphezulu kweetoni ezingama-500,000 zeemfuno zasekhaya zePLA ngowama-2025.
Kwicala lokubonelela, ngo-2020, amandla emveliso yePLA ayi-390,000. Phakathi kwayo, iNdalo yezeNdalo lelona lizwe likhulu elenza i-asidi ye-polylactic acid enomthamo wemveliso yonyaka weetoni ezingama-160,000 ze-asidi ye-polylactic acid, ebala malunga ne-41% yetotali yamandla ehlabathi. Nangona kunjalo, ukuveliswa kwe-asidi ye-polylactic kwilizwe lam isesebusaneni, uninzi lwemigca yemveliso incinci kwinqanaba, kwaye inxenye yemfuno ihlangatyezwa ngokungenisa elizweni. Iinkcukacha-manani ezivela kuLawulo Jikelele lweeNkcubeko zibonisa ukuba kwi-2020, ukungeniswa kwe-PLA yelizwe lam kuya kufikelela ngaphezulu kweetoni ezingama-25,000.
Amashishini ukwandisa imveliso
Imarike eshushu ikhe yatsala iinkampani ezisebenza kakhulu ngombona kunye neenkampani zebhayoloji ukuseta izinto zabo kwimakethi yolwandle eluhlaza okwesibhakabhaka yePLA. Ngokwedatha evela kuTianyan Check, okwangoku kukho amashishini asebenzayo / asindayo ayi-198 aquka "i-polylactic acid" kubume beshishini lelizwe lam, kwaye zongezwe ezintsha ezingama-37 kunyaka ophelileyo, ukonyuka konyaka nonyaka phantse iipesenti ezingama-20. Umdlandla weenkampani ezidwelisiweyo kutyalo-mali kwiiprojekthi zePLA uphezulu kakhulu.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkokheli yeshishini le-EVA yasekhaya i-Levima Technologies (003022.SZ) ibhengeze ukuba izonyusa imali yayo nge-150 yezigidi zeerandi kwiJiangxi Academy of Science New Biomaterials Co, Ltd., kwaye ibambe i-42.86% yezabelo zeJiangxi Isikolo seSayensi. Umntu ofanelekileyo ophetheyo kule nkampani wazise ukuba ukwanda kwemali kwiJiangxi Academy yeSayensi kuyakuqonda ubume benkampani kwicandelo lezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nokukhulisa amanqaku amatsha okukhula kwezoqoqosho kuphuhliso olulandelayo lwenkampani.
Kuxeliwe ukuba iJiangxi Academy yeSayensi ibandakanyeka kuphando nakuphuhliso, imveliso kunye nentengiso yePLA, kwaye iceba ukwakha "iitoni ezingama-130,000 / ngonyaka izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane polylactic acid iprojekthi yomzi-mveliso wonke" ngezigaba ezibini ngowama-2025, Inqanaba lokuqala liziitoni ezingama-30 / ngonyaka. Ngo-2012, kulindeleke ukuba iqalise ukusebenza ngo-2023, kwaye isigaba sesibini seetoni ezili-100,000 / ngonyaka kulindeleke ukuba siqalise ukusebenza ngo-2025.
I-Huitong Co., Ltd. (688219.SH) ikwazise iprojekthi ye-asidi ye-polylactic acid ngo-Epreli walo nyaka kunye ne-Anhui Wuhu Sanshan yoPhuhliso lwezoQoqosho kwiKomiti yoLawulo kunye ne-Hefei Langrun Asset Management Co., Ltd. ngokutyala imali ekusekweni kwe inkampani yeprojekthi. Phakathi kwabo, inqanaba lokuqala leprojekthi liza kutyala imali malunga neebhiliyoni ezimbini ze-yuan ukwakha iprojekthi ye-PLA ngesiphumo sonyaka seetoni ezingama-50 000, ngexesha lokwakha eliyiminyaka emithathu, kwaye isigaba sesibini seprojekthi siza kuqhubeka nokwakha iprojekthi ye-PLA ngemveliso yonyaka yeetoni ezingama-300,000.
Ukuphinda kusetyenziswe inkokeli ye-GEM (002340.SZ) kutsha nje kwiqonga lokunxibelelana nabatyali mali ukuba le nkampani yakha iprojekthi yeplastiki enokuthotywa yeetoni ezingama-30,000 / ngonyaka. Iimveliso ubukhulu becala yiPLA kunye nePBAT, ezisetyenziselwa ukubumbela ngenaliti yefilimu kunye nezinye iinkalo.
Umgca wemveliso yePLA kaJilin COFCO Biomaterials Co., Ltd., inkampani encedisayo yeCOFCO Technology (000930.SZ), iphumelele ukuvelisa izinto ezininzi. Umgca wemveliso uyilelwe ukuba ube nemveliso yonyaka emalunga neetoni ezingama-30,000 ze-polylactic acid ekrwada kunye neemveliso.
Inkokeli ye-lactic acid yasekhaya iJindan Technology (300829.SZ) inomtya omncinci wokuvelisa ulingo lweetoni ezili-1 000 ze-polylactic acid. Ngokwesi sibhengezo, inkampani iceba ukuba nemveliso yonyaka yeetoni ezingama-10 000 zeproylactic acid ezinokuboliswa ziintsholongwane. Ukuphela kwekota yokuqala, iprojekthi ayikaqali ulwakhiwo.
Ukongeza, iZhejiang Hisun Biomaterials Co., Ltd., Anhui Fengyuan Taifu Polylactic Acid Co., Ltd., Zhejiang Youcheng Holding Group Co., Ltd., kunye neShandong Tongbang New Material Technology Co., Ltd. zonke izicwangciso zokwakha iPLA entsha. amandla emveliso. Abahlalutyi baqikelela ukuba ngo-2025 ngo-2010, imveliso yonyaka ye-PLA inokufikelela kwiitoni ezingama-600,000.
Iinkampani ezinobuchule bokuvelisa itekhnoloji ye-lactide zingenza inzuzo epheleleyo
Okwangoku, ukuveliswa kwe-asidi ye-polylactic yi-polymerization ye-lactide yindandatho yinkqubo ephambili yemveliso ye-PLA, kwaye izithintelo zayo zobuchwephesha zikwindawo yokuhlanganiswa kwe-PLA ye-lactide eluhlaza. Ehlabathini, yiCorbion-Purac Inkampani yaseNetherlands kuphela, iNkampani yezeNdalo eMelika, kunye noZhejiang Hisun abanobuchule kubuchwephesha bemveliso ye-lactide.
"Ngenxa yezithintelo zobuchwephesha obuphezulu kakhulu be-lactide, iinkampani ezimbalwa ezinokuvelisa i-lactide ngokwazo ziyazenzela kwaye ziyasetyenziswa, nto leyo eyenza ukuba i-lactide ibe likhonkco eliphambili elithintela inzuzo yabenzi be-PLA, utshilo umzi-mveliso osele ukhankanyiwe ngaphambili. “Okwangoku, iinkampani ezininzi zasekhaya nazo zivula i-lactic acid-lactide-polylactic acid chain chain ngophando oluzimeleyo nophuhliso okanye ukwaziswa kwetekhnoloji. Kwishishini le-PLA elizayo, iinkampani ezinokuthi zenze ubuchwephesha be-lactide ziya kufumana ukhuphiswano olucacileyo, ukuze zabelane ngakumbi ngezahlulo zeshishini.
Intatheli yafunda ukuba ukongeza ku-Zhejiang Hisun, iJindan Technology ijolise kulwakhiwo lwe-lactic acid-lactide-polylactic acid chain chain. Okwangoku ineetoni ezingama-500 ze-lactide kunye nomgca wokuveliswa komqhubi, kwaye inkampani yakha iitoni ezili-10 000 zemveliso ye-lactide. Umgca uqale ukusebenza kwetyala kwinyanga ephelileyo. Inkampani ithe akukho miqobo okanye ubunzima obungenakoyiswa kwiprojekthi ye-lactide, kwaye ukuveliswa kwemveliso okuninzi kunokwenziwa kuphela emva kwexesha lokusebenza ngokuzinzileyo, kodwa ayichazi ukuba kusekho iindawo zokuphucula kunye nokuphucula ngelixa elizayo.
Ukhuseleko lwaseMantla luqikelela ukuba ngokwanda ngokuthe ngcembe kwintengiso yenkampani kunye nokugunyaziswa kweeprojekthi ezakhiwayo, ingeniso yeJindan Technology kunye nenzuzo kwi-2021 kulindeleke ukuba ifike kwi-yuan eyi-1.461 yezigidigidi kunye ne-217 yezigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-42.3% kunye ne-83.9% ngokwahlukeneyo.
Itekhnoloji ye-COFCO ikwatsho kwiqonga lokunxibelelana nabatyali zimali ukuba inkampani ibuchwephesha kwitekhnoloji yokuvelisa kunye netekhnoloji yokuqhubekeka kuyo yonke ishishini le-PLA ngosungulo lwetekhnoloji kunye nokwazisa okuzimeleyo, kunye neprojekthi yenqanaba le-lactide yeetoni ezili-10,000 nayo iyaqhubeka ngokuthe ngcembe. Ukhuseleko lweTianfeng luqikelela ukuba kwi-2021, i-COFCO Technology kulindeleke ukuba ifezekise ingeniso ye-27.193 yezigidigidi ze-yuan kunye ne-net yenzuzo ye-1.110 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka ngo-36.6% kunye ne-76.8% ngokwahlukeneyo.